လိုအပ်နေသောကွက်လပ် – Grab Love Story
မတ်ထွန်း ခဏနားပြီး အရက်ခွက်ဆီ လက်လှမ်းလိုက်သည်။ တစ်ခွက် ပြီး နောက်တစ်ခွက် … မီးတောက်အရက်ပြင်းပြင်းက ချက်ချင်းကြီးအာနိသင်ပြလာသည်။စောစောပိုင်းက ကုန်ခမ်းသွားသည့် အားအင်တွေက ပြန်လည်ပြည့်ဝလာရသလိုပင်။ အမြည်းအဖြစ်ဝယ်လာသည့် ကြက်အသည်းအမြစ်တစ်ဖတ်ကို ကောက်ဝါးရင်း နောက် အသည်းတစ်ဖတ်ကို မအုန်းပါးစပ်ထဲခွံ့ကာကျွေးလိုက်သည်။မအုန်းကျေကျေနပ်နပ်ကလေးပြုံးကာ အသည်းဖတ်လေးကို ကိုက်ဝါး၍နေပါသည်။သူ့ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်ကာ ခေါင်းကလေးမှီလိုက်ရင်း “သိပ်မသောက်နဲ့ မောင်လေးရယ် တန်ဆေး လွန်ဘေး တဲ့ ” “ဒီလိုညမျိုးအတွက် သူကဆေးဖြစ်တာပေါ့ မမအုန်းရဲ့” “အဲဒါက အားရှိလို့လား ” မအုန်းကသူ့ကို မျက်စကလေးချီ၍ မေးလိုက်တော့ “ဟင်း ဒါတော့မသိပါဘူး သောက်ပြီးလိုးရင် မိန်းမခိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ ဟဲဟဲ ” “အို မမအဖို့ တော့ အရက်မလိုပါဘူး။
ပြီးတော့ မောင်လေးက ဒီအတိုင်းလိုးရင်တောင် တစ်ချီတစ်ချီ တစ်နာရီနီးနီးလောက်ကြာတဲ့ဥစ္စာ ခုလိုသာ သောက်ပြီးလိုးရင် မမတော့ အသက်ဘယ်နားထွက်ရမယ် ဆိုတာတောင် သိမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဟင်းဟင်း ” သူမအပြောနှင့် ဟန်အမူအယာကလေးကြောင့် မြတ်ထွန်းရင်ထဲ လွိုင်းထလို့သွားပြီး မအုန်းခါးလေးကို စွေ့ကနဲပွေ့ဖက်ကာ တရကြမ်းပင် နမ်းစုပ်ပစ်လိုက်မိပါသည်။ သူမကိုအိပ်ယာပေါ်ဆွဲလှဲချလိုက်ပြီး နို့စို့လိုက် ကိုင်လိုက် စောက်ပတ်နွိုက်ဆွလိုက်နှင့် အတန်ကြာတော့ နှစ်ယောက်သား ရင်ခုန်သံမမှန်ဘဲဖြစ်လာခဲ့ကြပြီး မြတ်ထွန်းလည်း သူမကို အိပ်ယာပေါ်မှာ ပက်လက် အနေအထားအတိုင်း သူ့လီးကို မအုန်း၏ စောက်ပတ်ထဲထည့်သွင်း၍ အပေါ်စီးကနေ ဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာဖြင့် နောက်တစ်ချီ အပီအပြင် ထပ်ဆွဲလိုက်သည်။ အရက်ပြင်းကြောင့်လားတော့မသိ။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာ တကယ်ပဲ တစ်နာရီလောက်ကြာအောင် သုက်မထွက်နိုင်ဘဲ ရှိကာ။
မြတ်ထွန်းလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်း၍ တရကြမ်းပင် ရှိသမျှအားကုန်ထုတ်ကာ လိုးဆောင့်ပစ်လိုက်ပြီး မအုန်းခမျာမှာလည်း တစ်ချီပြီးတစ်ချီဆက်တိုက် ပြီးနေရသဖြင့် စောက်ပတ်တွေ ပူထူကျိန်းစပ်၍ သွားရလေသည်။ မအုန်းကို ပြန်ခွင့်မပေးသေးဘဲ ဒီအတိုင်းသူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲမှာ ထည့်စိမ်ပေးထားရင်း နှစ်ယောက်သား ကာမစိတ်ပြန်နိုးထကာ သူ့လိင်တန်တောင့်တင်းလာပြီး သူမစောက်ပတ်လည်း တရွရွပြန်ဖြစ်၍လာချိန်မှာ နောက်ထပ်တစ်ချီ ခွေးကုန်းလိုးဆောင့်လိုက်ကြပြန်ပါသည် …. မအုန်း စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး သူအလိုးကောင်းမွုကြောင့် ပြဲပြဲလန်၍ပင် နေချေပြီ။ မအုန်းလည်း ဒီတစ်နေ့ ဒီတစ်ညတည်းနှင့်ပင် သူမဘဝမှာ ကွက်လပ်ကြီးဖြစ်ကာ အရူအမူး လိုအပ်လျှက်ရှိသည့် လီးအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ဖူဖူလုံလုံကြီးပင် ရရှိလို့သွားရတော့သည်။ရက်သတ္တ တစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်သွားသည်။ မြတ်ထွန်းနှင့်မအုန်း နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုပင်။
အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နှင့် အတိုးချ အချစ်စခန်းဖွင့်ပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်ကမ္ဘာတည်ဆောက်လျှက်ရှိကြရာက အိမ်ကြီးရှင်မိသားစုတွေ ပြင်ဦးလွင်ကနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်ရှိန်သတ်မိကြတော့သည်။ အိမ်ရှင်ဦးကောင်းဇံ၏ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေရယ် သူမ၏သားသမီးသုံးယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသမီး မို့မို့ရယ် အကြီးဆုံးသမီးမှမွေးသည့် သူမ၏မြေးမကလေးနှစ်ယောက်ရယ် အားလုံးပေါင်း လေးယောက်ဖြစ်ပြီး သမီးကြီးတင်မေရီနှင့်အလတ်မစန္ဒီချိုကတော့ သူတို့အိမ်ထောင်နှင့်သူတို့ ဥရောပတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ အခြေချနေထိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ သမီးကြီးတင်မေရီမှာ အသက် နှစ်ဆယ့်ငါး နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သူမမှာ ငါးနှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်နှင့် လေးနှစ်သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိကာ နှစ်ယောက်စလုံးကို မိခင်ဒေါ်ကြော့ကြော့မေလက်ထဲ အပ်နှံထားပြီး အရွယ်ရောက်မှသာ ခေါ်ယူမည်ဟု တိုင်ပင်ထားကြသည်။
အလတ်မကတော့အသက် နှစ်ဆယ့်သုံး နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် အိမ်ထောင်ကျတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်သာ ရှိသေးတာမို့ သားသမီးမယူဖြစ်ကြသေးချေ။ကွယ်လွန်သူဦးကောင်းဇံနှင့်ဒေါ်ကြော့ကြော့မေမှာ သွေးသားရင်းခြာသမီးမိန်းကလေးသုံးယောက်အပြင် ဦးကောင်းဇံ၏ညီဖြစ်သူမှမွေးသော တူတော်စပ်သည့် အောင်သိန်းဇံဆိုသူကိုလည်း သားအဖြစ် မွေးစားထားခဲ့သေးသည်။ သူက ကယားပြည်နယ်ရှိ သတ္တုမိုင်းတစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေတို့ မိသားစုဝင်ငွေကို အများဆုံး ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပေသည်။သူမ၏အငယ်ဆုံးသမီးမို့မို့မှာ တက္ကသိုယ်တွင် ပညာသင်ကြားဆဲ အသက်အားဖြင့် ၁၈ နှစ်အရွယ်ခန့်သာ ရှိဦးမည်။ အိမ်ဖော်မလေး ဖွေးဖွေးနှင့်အသက်အရွယ်ချင်း အတူတူလောက်ပဲဖြစ်သည်။ သူတို့ လူစုံပြန်ရောက်လာကြ၍ မြတ်ထွန်းလည်း ကလေးတွေ ကျောင်းပို့ ကျောင်းကြိုနှင့်။
အငယ်မ မို့မို့ကိုရော ဒီနှစ်မှသူငယ်တန်းစတက်သည့် မြေးအကြီးကောင်ကစ်ကစ်ကိုရော အကြိုအပို့လုပ်ရင်း အလုပ်ကတော်ရုံနှင့် မအားလပ်နိုင်တော့ပေ။ ညဖက်လူခြေတိတ်ချိန်ကျမှသာ နှစ်ယောက်သားတွေ့ဆုံနိုင်ကြသည်။ ဒါတောင်မှ အရင်ကလိုညတိုင်း မဟုတ်တော့ဘဲ လူသူအလစ်ကိုစောင့်၍ နှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြားမှတစ်ခါ ဆိုသလို သူ့အခန်းမှာ လာရောက်တွေ့ဆုံကာ အချစ်ပွဲနွဲဖြစ်ကြသည်။ ဒီကြားထဲမှာ မြတ်ထွန်းက အပြောင်းအလဲလေးအဖြစ် သူတစ်ခါကပျော်ပါးဖို့ဆိုပြီး ခေါ်ယူခဲ့ဖူးသည့် ကောင်မလေး ( အညို )ကို တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သွားရောက် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကာ အတူပျော်ပါးလိုက်ကြသေးသည်။အညိုမှာ သူ့ကိုအတော်ကလေးအရေးပေးပြီး သံယောဇဉ်လည်းတော်တော်ရှိပုံရပေသည်။ တစ်နေ့တော့ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက မြတ်ထွန်းကို ပဲခူးသို့ ကိစ္စတစ်ခုနှင့်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို၍ ကားအထုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီး မနက်၁၀ နာရီလောက်မှာ အိမ်ကနေ နှစ်ယောက်သားထွက်ခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေမှာ အသက်အားဖြင့် ၅၀ ဝန်းကျင်ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အသားအရေဖြူဝင်းကာ အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်တောင့်တင်းဖွံ့ထွား၍ အချိုးအစားကျနပြေပြစ် လှပသူဖြစ်ကာ အသက်အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုသည့်မိန်းမချောကြီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ စိတ်တော့ နည်းနည်းထက်ပုံရသည်။ တစ်အိမ်သားလုံး သူပြောသမျှကို နာခံကြရသည်။မြတ်ထွန်းအပေါ်မှာတော့ သူကောင်းမွန်စွာပြောဆိုဆက်ဆံသည်။ အခြား သူစိမ်းယောက်ျားသားများနှင့် ရောနှောပတ်သက်မွု မရှိသော်လည်း မြတ်ထွန်းကိုမူ အိမ်သားချင်းဖြစ်၍ လားတော့မသိ။ တခြားသူနှင့် မတူအောင် မျက်နှာသာပေးသူဖြစ်သည်။ ကားပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သား ထွေရာလေးပါးစကားပြော၍ မောင်းနှင်လာကြရင်း ရန်ကုန်ကအထွက်မှာ သူမ ညကတစ်ညလုံးဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး အိပ်ရေးပျက်ထား၍ အိပ်ချင်သည်ဆိုကာ ကားရှေ့ခန်းထိုင်ခုံမှာ မြတ်ထွန်းဖက်ကို ကိုယ်ကို ခပ်လျှောလျှောကလေးထား၍။
မျက်လုံးအသာမှိတ်ကာ အိပ်လျက်သား လိုက်ပါစီးနင်းလာခဲ့ပါသည်။ မြတ်ထွန်းလည်း ကားမောင်းရင်း သူမ ဖက်ကိုမသိမသာစောင်းငဲ့ကြည့်ကာဖြင့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ လည်ဟိုက်အင်္ကျီအောက်မှ ရင်သားဆိုင် အသားထစ်ကြီးနှစ်မြွာက မို့မောက်တင်းကြွနေကြပြီး မြတ်ထွန်းစိတ်ကို အထူးပင်ဆွဲဆောင်ညွို့ငင်လျှက်ရှိလေသည်။ ဂီယာတံကို ကိုင်ထားသော မြတ်ထွန်းလက်တစ်ဖက်ကလည်း သူမ၏ထမီပျော့အောက်မှ နွေးထွေးနူးညံ့လှသော ပေါင်သားအိအိတစ်ဖက်ကို အမှတ်မထင် လာရောက်ထိတွေ့မိလျှက် … ။ မြတ်ထွန်းစိတ်တွေလွုပ်ရှားလာသည်။ ဖောက်ပြန်လိုစိတ်များ တဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသည်။ ဒီအချိန်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျနေဟန်ဖြင့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ကူရှင်ကိုမှီထိုင်နေရာက ဇက်ကလေးလိမ်ကာ သူ့ဖက်ကို စောင်းငိုက်ကျလာတာမို့ မြတ်ထွန်းက ကပျာကယာပင် သူမပုခုံးကလေးကို ဘယ်ဖက်လက်ဖြင့် အသာထိန်းကိုင်ကာပွေ့ဖက်၍ နေသားကျအောင် သူမကိုယ်ကိုပြင်ပေးလိုက်ရပါသည်။
အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေသည့် သူမမျက်လုံးကို မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်နှင့် ဖွင့်ကြည့်ကာ “မမ အိပ်ပျော်သွားတယ် ကိုထွန်း ” “မမကြော့ အိပ်ချင် ဆက်အိပ်လေ … ပဲခူး ရောက်ရင် ကျွန်တော်နွိုးမှာပေါ့ ” “အင်း အိပ်မယ် နော် … ကိုထွန်း ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ထိုင်နေရာက ကူရှင်မှာကွေးကွေးလေးလှဲအိပ်ချလိုက်ရင်း သူမ၏ ညာဖက်လက်က မြတ်ထွန်းပေါင်တစ်ဖက်ကို လာရောက်ထိကိုင်ထားလိုက်သည်။မြတ်ထွန်းစိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ်သွားသည်။ “ဒီပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ပါလား မမ ” ဘယ်လိုကဘယ်လိုပြောမိသွားသည်မသိ။ မြတ်ထွန်းသူ့ပေါင်တစ်ဖက်ပုတ်ပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေကို ပြောလိုက်တော့ သူမမျက်လုံးကလေး ဝေ့၍ ကြည့်လိုက်ပြီး … “ကိုထွန်း မောင်းရခက်နေမှာပေါ့ ” “ရပါတယ် ဖြေးဖြေးမောင်းမှာ ပါ မမ ရဲ့ လာ ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူ့ပေါင်ပေါ်ကိုမမီမကမ်းလေးခေါင်းအုံးအိပ်လိုက်ရာ သူမမျက်နှာကလေးက ပေါင်ခွကြားမှ မြတ်ထွန်းအင်္ဂါကြီးနှင့် မထိတထိကလေးဖြစ်သွားသည်။
မြတ်ထွန်းလက်တစ်ဖက်ကလည်း သူမကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်ရှိသွားပြီး ခါးကလေးကို ထိန်းကိုင်ပေးထားသလို ပွေ့ဖက်ထားသလိုပုံစံဖြင့် … သူ့လက်က ရင်သားအိအိတစ်ဖက်ကို ကောင်းစွာ ထိတွေ့မိသွားသည်။ဒေါ်ကြော့ကြော့မေလည်း စောစောကလောက် ငိုက်မြည်းမနေတော့ဘဲ မှိန်းရုံသာမှိန်း၍နေပါသည်။ ရုတ်တရက် … မြတ်ထွန်းအံ့သြဖို့ အချိန်တောင်မရလိုက်ပါချေ။ သူမအပြုအမူကြောင့် မြတ်ထွန်း မင်သက်မိသွားရသည်။ “အို မ မ ” “…… ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူ့လီးကို ကိုင်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုင်ရုံသာမဟုတ် ဆုပ်ကာဆွဲကာ ဆွကစားနေပေသည်။သူ့ကိုမော့၍ကြည့်ကာဖြင့် သူမနွုတ်မှလည်း … “မောင်လေး မင်း မိန်းမ မယူတော့ဘူးလား ” “အော် အင်း ဟင်း မ မ ကျွန် ကျွန်တော် …” “ဘာလဲ ရှက်နေသလား ကိုထွန်း ” ဆိုပြီး သူမလက်က မြတ်ထွန်းလီးကို အလွတ်မပေးဘဲဆုပ်မြဲဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ဂွင်းတိုက်သလို ဆောင့်ကာဆောင့်ကာပေးလိုက်ရာ လီကြီးမှာ ရုတ်ချည်းတောင်မတ်လို့လာခဲ့သည်။
ကားလေးက လမ်းဘေးမှာထိုးဆိုက်ရပ်တန့်သွားသည်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ မြတ်ထွန်း၏ပုဆိုးကို ဖြေလျှော့ချွတ်ချလိုက်ရာက မြတ်ထွန်းပေါင်ကြားထဲကို သူမမျက်နှာအပ်ကာ မှောက်အိပ်ချလိုက်ပါသည်။ “မမ ကြော့ အ အား မယုံနိုင်စရာပဲ မမရယ် ” ဟုတ်သည်။ မြတ်ထွန်းပြောမည်ဆိုလည်း ပြောစရာ… မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလွန်းနေသည်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ စိတ်ကို သူမမှလွဲ၍ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှလည်း ခန့်မှန်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။လင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးကတည်းက သူမ တစ်ပါးသောယောက်ျားများနှင့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှပင် မဖောက်ပြားမိအောင် တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိသည်။ သူမက မဟာဆီ မဟာသွေးပဲပါလို့လားတော့မသိပါချေ။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလျှင်လည်း သူမကို ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဘယ်အရာပင်ဖြစ်ပစေ တားဆီးလို့ မရနိုင်တာ အမှန်ပဲဖြစ်သည်။
အနောက်တိုင်းအလိုအရ အားကြီးသူ ဟုဆိုရမည်လားတော့မသိချေ။ ယခုလည်း မြတ်ထွန်းကို အေးအေးလူလူ နှစ်ယောက်တည်းတွေ့နိုင်ဖို့ တမင်တကာသူမဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီကောင်လေးကို သူမ လိုချင်သည်။ လိုချင်သည်ဆိုတာကလည်း ကြင်ယာအပ်နှင်းဖို့ အရေးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ လိင်မွုဆိုင်ရာသက်သက် ကာမလိုအင်ဖြည့်ဆီးဖို့ရန် အသုံးပြုလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပဲခူးသွားမည့်ကိစ္စက သိပ်ရေးကြီးခွင်ကျယ်တော့မဟုတ်ပေ။ သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ အကြံပေးချက်အရ ယောက်ျားရှိစဉ်က ဝယ်ယူထားခဲ့သော မြေယာများအတွက် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတချို့ပြုလုပ်ရန် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံ လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းသာဖြစ်သည်။ သူမအနေနှင့် ဤကိစ္စကို ကိုယ်တိုင်မလာနိုင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်လွဲအပ်၍ စီစဉ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ အရေးတကြီးအခြေအနေမျိုးမဟုတ်မှန်းသိသာလှပေသည်။ ကားလေးက မြို့ပြင်ထွက်သည့် လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ ငြိမ်သက်စွာရပ်တန့်လျှက်ရှိသည်။
ကားလေးအတွင်းမှာတော့ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေတစ်ယောက် မြတ်ထွန်းပေါင်ကြားထဲ သူမမျက်နှာ အပ်ထားရာကနေ ခေါင်းမဖော်နိုင်သေးပေ။ အတန်ကြာမှ သူမလှဲအိပ်နေရာက ထလာပြီး … “ကိုထွန်း မမကို တစ်မျိုးထင်နေပြီလား ” “မထင် ပါဘူး မမကြော့ ရယ် ” “မမ ခုလိုဖြစ်တာ တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မမ မင်းကို စိတ်ဝင်စားမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ ” “ပြောပါ …မမ ” “မမအကြောင်းလဲမင်းအသိပဲလေ မမဟာ လင်သေမုဆိုးမတစ်ယောက် ပြီးတော့ သမီးသုံးယောက်အမေလည်း ဖြစ်တယ်။မမကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လောက်ထိန်ထိန်းသိမ်းသိမ်းနေလာခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်းမျက်မြင်ပဲလေ ဒါပေမယ့် လူဟာလူ မိန်းမဟာမိန်းမပါပဲ မမလည်းသူများတကာလို ကာမဂုဏ်ခံစားချင်တဲ့ သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ် အရွယ်ရှိသေးတဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ပါ ဒီလောက်ပြောရင် မင်းနားလည်နိုင်မှာပါ မောင်လေး ” “မမကို ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် မမဘာလိုချင်သလဲ ကျွန်တော် ဖြည့်ဆီးပေးမယ်။
ဒီအတွက် ဘာအခွင့်အရေး တစ်ခုမှ ကျွန်တော်မယူဘူးဆိုတာ မမကြော့ကို ရဲရဲကြီးကတိပေးပါတယ် မမ ယုံပါ ” “ဟင်းဟင်း မင်း …တကယ်ပြောတာနော် မောင်မြတ်ထွန်း ” “တကယ် ဘုရားစူးရစေ့ မမ ကြော့ ရယ် ” “ဒါဖြင့် မမ မင်းကို ယုံလိုက်တော့မယ် မောင်လေး ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ပြောရင်းက သူမကိုယ်ပေါ်က အင်္ကျီကို စတင်ချွတ်ပေးလိုက်လေသည်။ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ဘရာအောက်မှ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာအယ်အယ်ထွားထွားကြီးဖြစ်သည်။ သူမက ဘရာစီယာကြိုးကလေးကို လျှော့ချပေးလိုက်တော့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက ဘရာအောက်ကနေ ခုန်ထွက်လာသည်။ မြတ်ထွန်း သူမနို့နှစ်လုံးကို လက်ဖြင့် စုံကိုင်၍ ဖျစ်နယ်လိုက်သည်။ သူ့ကိုယ်ကို နေရာရွေ့လာပြီး နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီကုန်းစို့ပေးသည်။နို့အောက်ခြေကနေ စုံကိုင်၍ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုကို နာနာလေးစို့ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေကော့ပျံ၍သွားကာ မြတ်ထွန်းကိုယ်လုံးကြီးကိုသူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သိမ်းကျုံးဖက်ထားလိုက်ရင်း …။
ကားလေးထဲမှာ သူမ၏ တဟင်းဟင်း ရယ်မောသံကလေးများ ပျံ့လွင့်၍သွားရချေပြီ။ “မမ တွေ့ချင်ပြီ ” “ဟင့်အင်း ဟိုရောက်မှတွေ့ ခု လမ်းပေါ်မှာကြီးဖြစ်နေတာ ” “အင်း ” “ဟိုရောက်ရင် တည်းခိုခန်းတစ်ခုခုဆီသာ တန်းမောင်းသွားလိုက် မောင်လေး ကြားလား ” “ကောင်းပါပြီ မမကြော့ ” မြတ်ထွန်းလက်များက သူမကိုစရံသတ်သည့်အနေနှင့် ပေါင်ကြားထဲကိုလက်ထည့်ကာ သူမ၏အဖုတ်ကို နွိုက်စမ်း နေသည်။ အဖုတ်ကလေးမှာဖုဖုဖောင်းဖောင်းဖြစ်လျှက် စိုစိစိကလေး အရည်များစိမ့်ယိုကျနေတာကို တွေ့ရသည်။”ကဲပါ ကားကိုသာမြန်မြန်မောင်း မမ မင်းတွေ့ချင်တာ ပြပေးမယ် ” “တကယ်နော် ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူ့ကိုမချိုမချဉ်ကလေးကြည့်၍ မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို အသာမှိတ်ကာ လျှာကလေးတစ်လစ် ထုတ်ပြလိုက်လေသည်။ ကားလေးက လမ်းမကြီးပေါ်ကိုတက်လာပြီး တရှိန်ထိုးကြီး မောင်းထွက်၍ လာခဲ့လေသည်။ “မောင်လေး ဒီမှာ ” ဆိုပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူမ၏ထမီကို။
အောက်နားကနေ အသာပင့်လှန်တင်လိုက်ရာက ထမီအောက်ကို လက်လျှိုပြီး အောက်ခံပင်တီကလေးကို ဖင်ကိုကြွ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်ကာ ထမီကို သူမခါးအထက်ဆီလှန်တင်ပြ လိုက်လေသည်။ ပင်တီမရှိတော့တာမို့ အမွေးအမြင် ကွေးကွေးနက်နက်အဖုတ်ကလေးအကြားမှ ဖောင်းကြွကာနေသော သူမ၏စောက်ပတ်မှာ အကာအကွယ်မဲ့စွာဖြင့် ဘွားကနဲထွက်ပြူလာခဲ့ရလျှက်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ သူမ၏စောက်ပတ်ကို လက်ဝါးဖြင့်အသာအုပ်၍ ပွတ်သီးပွတ်သပ် လုပ်ပြလာလေသည်။ အကွဲကြောင်းကလေးကို ဖွဖွရွရွကလေးပွတ်၍ မြတ်ထွန်းဖက်ကို မြင်သာအောင် အဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုင်ပြ ဖြဲပြလုပ်နေသည်။မြတ်ထွန်းလည်း သူ့လီးကြီးကို ပုဆိုးအောက်ကနေလှန်တင်လိုက်ကာ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ အရှေ့မှာ ခပ်တည်တည်ပင် လီးဂွင်းတိုက်ပြနေမိလေပြီ။ မြတ်ထွန်း ကားကို မနည်းကြိုးစားပြီး ဖြောင့်အောင်မောင်းခဲ့ရသည်။
စတီယာရင်ကို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်ကာ လီးကို တစ်ဖက်ကဆောင့်ဆောင့်ပြကာဖြင့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ကလည်း သူမစောက်ပတ်ကို လှန်ဖြဲပြနေရာမှ လက်တစ်ဖက်က မြတ်ထွန်းလီးကို လာရောက်ဆုပ်ကိုင်ကာ ဂွင်းရိုက်ပေးနေရင်း မြတ်ထွန်းလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် အခွင့်အရေးရလျှင် ရသလို သူမစောက်ပတ်ကို နွိုက်ပွတ်ပေးနေလိုက်ကာ ပဲခူးမြို့သို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ လိပ်ပြာကန်ဖက်က အသိအိမ်တစ်အိမ်ဝင်၍ စကားအနည်းငယ် ဝင်ရောက်ပြောဆိုပြီး ပြန်လှည့်လာမည်ဟု ဆိုကာ တည်းခိုခန်းတစ်ခုဆီကို ဦးတည်၍ မောင်းလာခဲ့လိုက်လေသည်။ အခန်းတစ်ခုထဲကို နှစ်ယောက်သားလှမ်းဝင်လိုက်သည်။ “လိုး ချင်ပြီ … မမ ရယ် ” “အို ဟင်း ဟင်း …ဟင်း မင်း မင်းနော် ” “မမစောက်ဖုတ်ကို ခုနကလို လှန်ပြ … နေ… နေ ထမီ မချွတ်နဲ့ဦး …ထမီအောက်ကနေပဲ လှန်ပြ ကြည့်ချင်လို့ ဟင်းဟင်း ” “ရတယ် မင်းကြည့်ဖို့ပဲလေ ကဲ ဒီမှာ ဝအောင်သာကြည့် ဟင်း ဟင်း ဟင်း “။
ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ကုတင်ပေါ်မှာခြေဆင်းထိုင်လိုက်ရာက စောစောတုန်းက ကားပေါ်မှာလုပ်သလိုပင် သူမထမီကို ခါးအထက်ဆီ ပင့်လှန်တင်ပြလိုက်ပါသည်။ စောက်ဖုတ်တစ်ကွင်းလုံး အတိုင်းသားပေါ်ပြီး ထူထပ်သောအမွေးအမြင်အဖုတ်ကလေးကို မြတ်ထွန်းက သူ့လက်ဖြင့်သပ်၍တင်လိုက်ရာက သူမခြေရင်းမှာ ထိုင်ချလိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်ကိုမျက်နှာအပ်ပြီး ပါးစပ်ဖြင့် လှမ်း၍ စုပ်နမ်းနေလိုက်ပါတော့သည်။ “အို မောင် မြတ် ထွန်းးး ……… ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ ဖီးလ် အရမ်းတက်သွားရသည်။ မြတ်ထွန်းခေါင်းကို သူမ၏ လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဖိကာဖိကာဖြင့် စောက်ပတ်ကိုကော့ကော့ပေးလိုက်ရင်း ကုတင်ကြီးပေါ်ကို နောက်ပြန်လဲပြိုကျသွားရလေသည်။ မြတ်ထွန်း သူမကို လုံးဝကို အနားမပေးတော့ပြီ။ သူ့အလုပ်ရှင်လည်းဖြစ် အသက်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုသည့် အလှပဂေးမမ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည့် မမကြော့စောက်ပတ်ကို မရွံမရှာပင် လျှာဖြင့် တပြတ်ပြတ်ယက်၍။
စောက်စေ့ကလေးကို စုပ်ကာစုပ်ကာ ဆွနှူးပေးနေသည်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ လုံးဝသည်းမခံနိုင်လောက်အောင် တဟီးဟီး ညည်း၍ အပြတ်ပင်ထွန့်လူးလာရတော့သည်။ မြတ်ထွန်းက သူ့လက်ချောင်းများနှင့်သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲကို နွိုက်ကာနွိုက်ကာ ဆောင့်ထိုးပေးလိုက်ရင်း အစိကလေးကိုလည်း မလွတ်စတမ်းခဲ၍ စုပ်ငုံပေးနေသည်။ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ အခေါင်းကလေးထဲမှစောက်ရည်များ မပြတ်ပင်စီးကျလာသည်။ စောက်ပတ်တဝိုက်ကို လျှာနှင့်ရစ်ဝိုက်ကာ အစိကိုလွုပ်ဆွလိုက် စောက်ခေါင်းထဲ လျှာတစ်ခုလုံး ထည့်သွင်း မွေနှောက်လိုက်လုပ်ရင်း မြတ်ထွန်းလည်း သူမအရည်တွေ မဟားဒယားထွက်ကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်တော့မည့်အဖြစ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်မိ၍ သူ့လီးကြီးကိုပြင်ကာ သူမစောက်ပတ်အဝမှာ လာရောက်တေ့ချိန် လိုက်လေသည်။”မင်း လီးကြီးနဲ့ တအားဆောင့်မလိုးနဲ့နော် ကိုထွန်း ” “စိတ်ချ မမကောင်းအောင် လုပ်ပေးမှာပါ “။
မြတ်ထွန်းပြောလိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်နွုတ်ခမ်းသားတွေကို လီးထိပ်နှင့် ထိုးထိုး၍ ကော်တင်လိုက် ထိုးနှစ်ဆွလိုက်လုပ်နေပါသည်။ စောက်ရည်တွေ ပိုပိုထွက်လာသည်။ “မမက အရည်တွေ အရမ်းသန်တာပဲနော် ” “အို မင်း လီးကြီး … ဒီလောက်ဆွနေတဲ့ဥစ္စာ ဟင်း …ဟင်း ” “ကျွန်တော်လိုးမယ်နော်မမ ကျွန်တော့်လီးလည်း ကားပေါ်မှာ မမစုပ်ထားတာနဲ့ တောင်ချင်တိုင်းတောင်နေပြီ လိုးချင်လှပြီ ” မြတ်ထွန်း တမင်တကာပင်ပြောလိုက်ရာ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက … “လိုးပါ အားရပါးရလိုး အိမ်ကျရင်သာ ဣနြေ္ဒမပျက်စေနဲ့ မောင်လေး ကြားလားမမ ပြောတာ ” “ဟုတ်ကဲ့မမ စိတ်ချပါဗျာ ” မြတ်ထွန်းပြောလိုက်ရင်း သူမပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ပြဲပြဲကားကားလုပ်စေလိုက်ရာက စောက်ပတ်အဝမှာ တေ့၍ထားသည့် သူ့လီးဒစ်ထိပ်ကြီးကို ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ စောက်ပတ်အခေါင်းပေါက်ကလေးထဲသို့ စွတ် ဗြွတ် … ဆိုပြီး အားနှင့်ဖိဆောင့်လိုးချလိုက်လေသည်။
လီးက သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲကို တဝက်နီးနီးလောက် တစ်ကြပ်စွာ တိုးဝင်သွားသည်။ “အ အမေ့ … အင့် … အိ ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ မျက်နှာကလေးရွုံ့မဲ့လို့သွားပြီး သူ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို သူမလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းကြီးလာရောက်ဆုပ်ကိုင်လာသည်။ “နာသွားလား မမ ကျွန်တော် ဖြေးဖြေးလိုးပေးမယ် ” “ရတယ် မောင်ထွန်း မင်းအဆင်ပြေသလို လိုးပါ မမကြိုက်တယ် မမစောက်ပတ်က လီးမဝင်တာကြာပြီဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြပ်နေမှာပေါ့ မောင်လေး ” ပြောပြီး သူ့မျက်နှာကိုစေ့စေ့မော့လို့ကြည့်လိုက်ရာက “ပြီး …တော့ မင်း က … လီး တအားကြီးတယ် မင်းလီးကို မမခံကြည့်ချင်တယ် ” ဟုပြောလိုက်ရင်း မြတ်ထွန်းခါးကို တအားပင်ဖက်တွယ်ထားလိုက်ပါသည်။ မြတ်ထွန်းလည်း ကာမအဆိပ်က ငယ်ထိပ်ရောက်နေပြီဖြစ်၍ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏ ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းပင်ဆုပ်ကိုင်ဆွဲယူကာဖြင့် တဇွပ်ဇွပ် တဗွပ်ဗွပ် အသံမြည်အောင်ပဲ လေးငါးဆယ်ချက်မက ဖိဖိဆောင့်ချလိုက်တော့၏။
“အားးးး ကောင်း ကောင်းလိုက်တာ အထွန်းရယ် မောင် မောင်လေး လိုး လိုးစမ်း ကြမ်းကြမ်းလိုးစမ်းပါ မမကြော့စောက်ပတ်ကွဲရင် ကွဲ ပစေ မညှာနဲ့ သိလား အိ အိ အင့် အင့် ဟင့် ” “စွတ်ဖွတ်ဗွပ် ဘုတ်ဖတ် ဘုတ်ဘုတ် စွပ် ဖွပ် ဘုတ် စွိဇွပ် ဖွပ် ဗွပ် ” “အ အ ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေး မင်းလီးကြီး ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ နော် လိုးစမ်း လီးအရင်းထိ တဆုံးထည့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်စမ်း ဟင်းဟင်း ” မမကြော့ အပြတ်ထန်နေပြီ။ ဏှာအပြတ်ထနေပြီ လို့ ဗေဒင်ပင်မေးစရာမလိုဘဲ ပြောနိုင်သည်။ မြတ်ထွန်းက … “မမကြော့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထမ်းပြီး လိုးပေးမယ် ဒါမှ လီးအဝင်နက်ပြီး ဖီလင်အပြည့်ရမှာ မမရဲ့” “လုပ် လုပ်လေ မင်းအကြိုက် လိုးချင်သလောက်လိုး လို့ ပြောထားသားနဲ့ မောင်လေး ဆောင့်ဆောင့် မနားလိုက်နဲ့တော့ မမ ပြီးချင်လာပြီ ” မမကြော့ လောဆော်မွုကြောင့် မြတ်ထွန်းလည်း အချက်လေးဆယ်ငါးဆယ်လောက်အထိ လီးတဆုံးဖိဖိဆောင့်ချလိုက်ရပြီး။
သူ့ဆောင့်ချက်အတိုင်းဒေါ်ကြော့ကြော့မေလည်း ခါးလေးကို ကော့ကော့ထိုးကာ စောက်ပတ်ကို မြောက်ကြွခံဆောင်ရင်း သူမစောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များ အဆက်မပြတ်ပန်းညှစ်ထုတ်လိုက်လျှက် တစ်ချီပြီးမြောက်ကာ ပန်းတိုင်ရောက်ရှိသွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ မြတ်ထွန်းလည်းပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်လာ၍ နောက်ထပ်အချက်နှစ်ဆယ် လောက် အားသွန်လိုးဆောင့်ရင်း လရည်တွေကို သူမစောက်ခေါင်းထဲ ပန်းလွတ်ထည့်လိုက်ရသည်။ “မမ အဆင်ပြေလား ဟင် ” “အတိုင်းထက် အလွန်ပဲ အထွန်းရယ် မမကို မင်းလက်နဲ့ တင်းတင်းဖက်ထားစမ်းပါကွယ် မမ ဒီလို မခံစားရတာကြာပြီ မောင်လေး ” “အော် မမရယ် ချစ်လိုက်တာ မမရယ် ” “ဘာရယ် အထွန်း ” “ချစ် ချစ် လိုက်တာ လို့ …” “အဟွန်း …ဟွန်း ဟင်း … ဟင်း… ဟင်း ” မမကြော့ ကိုယ်လေးတသိမ့်သိမ့်တုန်အောင်ပင် အသံလွင်လွင်ကလေးရယ်မောလိုက်ရင်း မြတ်ထွန်းခါးကို တအားဖက်၍။
သူ့နွုတ်ခမ်းထူအမ်းအမ်းကြီးနှစ်ချပ်ကို သူမနွုတ်ခမ်းဖူးဖူးတွဲတွဲကလေးနှစ်လွာဖြင့် ဖိကပ်နမ်းစုပ်ပစ်လိုက်ရာက …။ “ချစ် ချစ် ပါသတဲ့ ရှင် ဒီက ဟော … ဒီ ကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီးတော့ ကို ချစ်ရပါသတဲ့ …ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဒါ ပဲနော် ကိုထွန်း ” “ဘာ ဘာလဲ ဟင် …မ မ ??? ” “ကိုထွန်း နောက်ကို အိမ်မှာ ဖာမခေါ်ချရဘူး ဒေါ်အုန်းနဲ့လည်း ချိန်းပြီးမလိုးရတော့ ဘူး မမကြော့ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ရမယ် ဟုတ်ပြီလား ” မြတ်ထွန်း အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားသည်။ “ဟင် ဒါ . ဒါ က မမ ဘယ် …ဘယ် လို သိ … ” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ တဟင်းဟင်း ရယ်လိုက်သည်။”မမက ဒီအိမ်မှာ အကြီးဆုံး တာဝန်အရှိဆုံးလူပဲ ဒီအိမ်မှာဖြစ်ပျက်တာ အကုန်သိရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား ဟင်း ဟင်းဟင်း ” “ဘယ်သူပြောလို့များလဲ မမရဲ့” “မင်းက မအုန်းပြောတယ်ထင်လို့လား ဒီလိုပဲပေါ့ မမဖာသာသိတယ်လို့သာ သဘောထားလိုက် မင်း မအုန်းကို တော်တော်ဆော်လိုက်သေးတယ်ဆို ” “အာ ဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး မမကလဲ “။
“သေချာလို့လား … ပေါင်တွေတောင်ကွတယ်လို့ကြားတယ် အဟင်းဟင်း ” မမကြော့က သူမစကားကို သူမဖာသာသဘောကျသလို ရယ်နေလိုက်ပြီး … “ကဲ ထားလိုက်ပါကွာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် မင်းလီးပြစမ်းပါဦး အထွန်းရဲ့ မတောင်သေးဘူးလားလို့ ဟင်း ဟင်း” ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက မြတ်ထွန်းလီးကို အသာကိုင်စမ်းရင်း ဟိုဆုပ်ဒီနယ်ပြု၍ မြတ်ထွန်းလည်း သူမနို့ကိုကုန်း၍ စို့ကာဖြင့် ပေါင်ကြားထဲသို့ လက်နွိုက်ကာ ဆွ၍ဆွ၍ ပေးနေလိုက်လေသည်။ မြတ်ထွန်းလီးကြီးမာန်ဖီထောင်ထ၍လာသည်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေက သူ့လီးဒစ်လုံးကို စုပ်ကာငုံကာ လျှာနှင့်ယက်ဆွနေရင်း လီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲသွင်း၍ ထည့်ဆောင့်ပေးနေသည်။ လီးကိုကုန်းစုပ် ပေးနေသော သူမ၏ဖင်သားအိအိကြီးနှစ်ဖက် အကြားရှိ စောက်ပတ်ကို မြတ်ထွန်းက လက်နှင့် ထိုးမွေကာ နွိုက်ဆောင့်ပေးသည်။ စောက်ပတ်တဝိုက်ကိုလည်း ပါးစပ်နှင့်နမ်းစုပ်၍ လျှာနှင့်တပြတ်ပြတ်ယက်ကာ ပေးလိုက်ရာ။
မမကြော့ ဖင်ကြီးပိုကြွ၍ ကုန်းတက်လာခဲ့သည်။ စောက်ပတ်ကိုရော ဖင်စအိုဝကလေးကိုပါ တစ်လှည့်စီလက်နှင့်ထိုးဆွ လျှာနှင့်ယက်သပ်၍ တပြွတ်ပြွတ်နှင့် နေအောင် နမ်းလိုက်စုပ်လိုက် ယက်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာမို့ မမကြော့ ကာမအကြောတွေ တဖျင်းဖျင်း နိုးကြားထကြွလာရပြီး ကုန်းရမလို ကွရမလိုဖြစ်ကာ မခံချိမခံသာထွန့်လူးကော့ပျံ လာခဲ့ရချေပြီ။မမကြော့နှင့်သူ နောက်တစ်ချီထပ်မံ စခန်းသွားကြသည်။ ဒီတစ်ချီမှာမြတ်ထွန်းက အပြတ်ကို နွိုးဆွပေးထားပြီးဖြစ်၍ မမကြော့စောက်ပတ်မှာ စောက်ရည်များဖြင့် နူးအိကာနေပြီး စောစောတုန်းကထက် လီးအဝင်ပိုကောင်းလာသည်။ ပက်လက်လှေကြီးထိုးပုံစံအတိုင်း သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထမ်း၍လိုးသည်။ သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲမှာ သူ့လီးတုတ်တုတ်ကကြပ်စီးကာနေပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် အားပါပါဆောင့်ချလိုက်တိုင်း စောက်ပတ်နွုတ်ခမ်းသားတွေ ဟဟပြဲပြဲဖြစ်လျှက် လီးကြီးကျွံဝင်သွားတာကြည့်ပြီး။
မမကြော့ရောမြတ်ထွန်းပါ ရာဂမီးတွေပိုလို့တောက်လောင်ဆူပွက် လာခဲ့ရသည်။ မြတ်ထွန်းလည်း ဇယ်ဆက်သည့်နှယ် မညှာစတမ်း ဆောင့်လိုးချရင်း လီးဝင်လီးထွက်သံတွေက တဇွပ်ဇွပ် တဗွပ်ဗွပ်နှင့် လီးကတဖြည်းဖြည်း အဆုံးအထိဆောင့်ဝင်သွားပြီး မမကြော့နွုတ်မှညည်းညူသံများကလည်း တစ်စထက်တစ်စ ပိုမိုကျယ်လောင်၍လာပေသည်။ လီးကထိချက်ပြင်းလှသည်ဟုဆိုရမည်။ လုံးပတ်တုတ်သလောက် အလျားရှည်သောလီးဖြစ်၍ သူမရင်ခေါင်းထဲအထိ နင့်ကနဲနင့်ကနဲ သိပ်သည်းစွာ တိုးဝင်သွားပြီး တဒုတ်ဒုတ်နှင့် သားအိမ်ခိုက်အောင်ပင် ထိထိမိမိ ရှိနေပေသည်။ ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ တစ်ယောက် မြတ်ထွန်းလိုးဆောင့်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါ၍ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ထိုးပေးနေရင်းက စိတ်မထိန်းနိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နှင့် အကြောဆွဲသလိုဖြစ်ကာ စောက်ရည်များပန်းထွက်၍ တစ်ချှီ ထပ်မံပြီးသွားသည်။ မြတ်ထွန်းက သူ့လိုးဆောင့်မွုကိုမရပ်ဘဲ။
အချက်လေးငါးဆယ် ဆက်လက်လိုးဆောင့်ပေးနေပြီး ဒေါ်ကြော့ကြော့မေလည်း စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ပူထူပြီး ကျိန်းလာခဲ့ရတာကြောင့် … “မောင်လေး ခဏနေဦး ” ဆိုပြီး … “မမ နည်းနည်းညောင်းလာလို့ အနောက်ကနေပဲ လိုးပေးကွယ် ” ဟု ပြောလိုက်ရင်း သူမကိုယ်လေးကို အနောက်ဖက်လှည့်၍ ဖင်ကိုကျကျနနပင် ကုန်းပေးလိုက်သည်။ မြတ်ထွန်းလည်း သူမအလိုကျ ဖင်ကုန်းလိုးပေးသည်။ ခွေးကုန်းလိုးဆောင့်မွုကို သူမအနေနှင့် လိုလိုလားလားရှိတာတွေ့ရ၍ မြတ်ထွန်း ဒေါ်ကြော့ကြော့မေကို ကြိတ်ပြီး သဘောကျမိသွားသည်။ သူ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံလည်းဖြစ်ပေရာ မြတ်ထွန်း သူမဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကိုဖျစ်ဆွဲ၍ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သူ့လီးကြီး တဗြွတ်ဗြွတ်ထည့်သွင်းပြီး အားကြိုးမာန်တက်လိုးဆောင့်ရင်း အချက်သုံးလေးဆယ်ခန့်လိုးပြီးချိန်မှာ သူလည်း မဟန်နိုင်တော့ဘဲ လရည်တွေကို သူမ၏ စောက်ပတ် လိုဏ်ခေါင်းလေးအတွင်းသို့ တဗြစ်ဗြစ်နှင့် သွန်၍ ပန်းထည့်လိုက်ရလေသည်။
“မမ ကြိုက်လား ကောင်းရဲ့လားဟင် ” “ဘယ့်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲ မောင်လေးရယ် ကောင်းလွန်းလို့ မမအိပ်ယာကနေ မထချင်အောင်ကို ဖြစ်နေပြီ ” ဆိုပြီး … “မင်းလီးကြီးကလဲ တကယ်ကြီးသလောက် တအားလိုးနိုင်တဲ့လီးကြီးပဲ မမအသက်ရှူတောင်မဖြောင့်ဘူး သိရဲ့လား …ဟင်း ” “မမစိတ်တိုင်းကျလိုးပေးတာပါ … မမရဲ့ဟင်း ဟင်း ” “တစ်နေ့လုံး လိုးရအောင်ကွာ ညနေမှ အလုပ်ကိစ္စ သွားပြောကြတာပေါ့ ” မမကြော့ အလိုကျ တည်းခိုခန်းမှာ နောက်ထပ်နှစ်ချီထပ်ဆွဲလိုက်ကြသည်။ ညနေစောင်းလောက်မှာ သူမအသိအိမ်သွားရောက်ပြီး မြေယာနှင့်ပတ်သက်၍လိုအပ်သည်များကို ပြောဆိုတိုင်ပင်ကြပြီး မနက်ဖြန်ရုံးချိန်အတွင်း ကိစ္စအပြီးဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီမွုယူကာ တည်းခိုဆောင်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ “ဒီတစ်ညတော့ အချိန်ရသေးတယ် မောင်လေး … မနက်ဖြန်ညနေကျမှ တို့ဒီကနေပြန်ကြတာပေါ့ ” သူ့ကိုပြောပြီး ခပ်စူးစူးကလေးစိုက်ကြည့်လိုက်သည့် ဒေါ်ကြော့ကြော့မေ၏အကြည့်တွေထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာသောအဓိပ္ပါယ်တွေ ပါဝင်နေကြောင်းကို မြတ်ထွန်းတစ်ယောက်မှလွဲ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သိနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါချေ ……. ပြီးပါပြီ။
ကျ မ လည်း ကောင်း သူ လည်း ကောင်း